Antigua sy Barbuda Citizenship ho an'ny Antigua Harbour Island Residence Share
Antigua sy Barbuda Citizenship avy any Antigua Harbour Island Residences
Ny fahazoana zara amin'ny hôtely hahazoana Antigua sy Barbuda Citizenship
Ny fandosiranao mankany amin'ny villa Karaiba!
Ao amin'ny tanàna fialan-tsasatra mahafinaritra any Jolly Harbour, ny carte postales dia manasongadina ireo villa mpitaiza trano 2-efitrano fandraisam-bahiny misy haingo sy mihaja tsara. Ny villa misy anay dia manolotra fomba fijerin'ny rano sy faritra maitso maitso mandavona ireo havoana manodidina. Ny vilaninay dia fialan-tsasatra tonga lafatra ary safidy tsara ho an'ny fianakaviana, faran'ny herinandro, volan-tantely, mpandeha irery na namana.
Fandraisana vahiny kintana dimy
Ny fampiononan'ny vahininay dia zava-dehibe indrindra aminay, ka amin'ny fotoana hidiranao ao amin'ny Harbour Island Residences dia hahatsapa ho tony sy milamina ianao. Tsy misy zavatra be loatra ho antsika.
5 MINITRA mandeha amin'ny morontsiraka
Amin'ny tongotra 5 minitra fotsiny dia afaka mahazo ny iray amin'ireo tora-pasika 365 eto amin'ny nosy ianao ... eny, 365 ny torapasika eto amintsika. Ao amin'ny faritr'i Jolly Harbor ihany koa no misy ny 1,6 km tsy manam-paharoa amin'ny Beach Jolly.
RESTORANTSAN'NY STAR 5 akaiky
Toeram-pisakafoanana amoron-dranomasina, mahazatra sy kanto isan-karazany izay ahafahanao mankafy ny cocktail tianao indrindra mandritra ny ora falifaly sy filentehan'ny masoandro any amin'ny nosy.